Madaxweynaha Yemen oo la Shiray Ciidanka
Madaxweyne Cali Cabdalla Saalax ayaa sheegay in saraakiishii ciidamada ee goostay ay u dambeyn doonaan Jahannamo.
Madaxweynaha dalka Yemen Cali Cabdalla Saalex ayaa galabta la shiray hogaanka sare ee ciidamada qalabka sida ee waddankiisa. Shirkaas ayaa si toos ah looga baahiyay telefishanka dalka Yemen.
Madaxweyne Saalex ayaa madaxda ciidanka ee uu la kulmay u sheegay inaysan ku dayanin saraakiishii sar sare ee shalay ku biiray dadka dibad-badxyada ka wada Yemen, kuwaasoo uu sheegay inay u hooban doonaan sida caleemaha geedaha ee jiilaalka keligood daata.
Waxa uu madaxweynaha Yemen intaas raaciyay, in kuwii ciidamadiisa ka goostay ay ku dambeyn doonaan waxa uu ugu yeeray Jahanamo, isagoo saraakiishii goostay kula taliyay inay ka soo noqdaan khaladkooda, cudur-daarna la yimaadaan.
Madaxweynaha Yemen wuxuu sidoo kale ka dhawaajiyay in tallaabadan ay shalay ku dhaqaaqeen saraakiishii sar sare ee dibad-baxayaasha ku biiray uu ficilkoodu la mid yahay "Afgambi", afgambina uu horseedi karo dagaal sokeeye oo Yemen ka dilaaca.
Mr. Saalex ayaa dhalinyarada dibad-baxyada dhigaya ku sheegay kuwo ay ku shaqeystaan dad uu ku tilmaamay inay dano gaar ah wataan.
Kulankan madaxweynaha Yemen uu la qaatay hogaanka sare ee ciidamada qalabka sida waxa uu yimid maalin ka dib markii ay goosteen tobaneeyo saraakiil sare sare oo xoogga dalka ka tirsan iyo guutooyinkii ay wateen, iyo ku xigeenkii baarlamaanka dalka Yemen, kuwaasoo ku biiray dadka ka soo horjeeda madaxweyne Cali Cabdalla Saalex ee baaqaya inuu xilka ka dego.